1. Waa maxay baaritaanka tijaabada ah? Sidee u shaqeysaa? Baadhitaanka Cypionate (58-20-8) Marka la eego barta-qaabaynta jirka ee meesha laga filayo in ay aad u sarayso, saacado badan oo tababar ah iyo diin ayaa laga yaabaa inaanay ku siin natiijooyinka la rabo muddada ugu gaaban ee aad dooneysid. Sida aad u hubineysid, waqtigan xaadirka ah, waxaad iska joojisay cuntooyinka dufanka leh, oo waxay qaadan kartaa dhammaan waqtiga tababarkaaga. Waa wax la cuno ...
1. Waa maxay Dianabol? Dianabol (72-63-9) waa mid ka mid ah steroids-anabolic oo leh sumcad weyn oo ka mid ah ciyaartoyda iyo jir-dhiseyaasha adduunka oo dhan. Waxaa si weyn loo isticmaalaa ujeedooyinka jir-dhiska iyo ujeeddooyinka jirka si ay u caan baxaan. Qaar ka mid ah dadka isticmaala waxay tixraacayaan steroidkaan oo ah '' grand-daddy '' ee steroids kale. Tani waa sababta oo ah natiijooyinka waaweyn ee aadka u sarreysa. Waa hormoon la isku soo dejiyey ...
Waa maxay Nandrolone Phenylpropionate / NPP? Nandrolone Phenylpropionate (62-90-8) waa mid ka mid ah noocyada badan ee anabolic anabolic available ee suuqa. Steroidkani waxay leedahay sifooyin iyo saameyn isku mid ah Nandrolone Decanoate. Qaybta Nandrolone ee ugu horeysay ee lagu iibiyo waa Nandrolone Phenylpropionate (NPP). Waxyaabahan cajiibka ah ayaa bilaabay in ay garaacaan qalabka 1950s ka dib markii ay sii daayeen Organon oo leh magac magaciisu yahay Durabolin. ...